रु रु को आईपीओ आज बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड गरिँदै, कसरी हेर्ने आईपीओ रिजल्ट ? - Artha Path Artha Path
रु रु को आईपीओ आज बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड गरिँदै, कसरी हेर्ने आईपीओ रिजल्ट ?
काठमाडौं । रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आईपीओ आज शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड गरिने भएको छ । रु रु जलविधुतको आईपीओ भोलि शुक्रबार (वैशाख ३ गते) बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा बिहान ८ः३० बजे बाँडफाँड गरिने छ ।
रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आईपीओमा १६ लाख ६९ हजार ५ सय ६६ जना आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका आवेदककर्ताहरुले २ करोड ३३ लाख ७७ हजार २२० कित्ताका लागि २ अर्ब ३३ करोड ७७ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा ६२ गुणा बढी आवेदन परेको हो ।